कोरोनाको पुच्छर समात्ने सरकार
सुन्दर खनाल काठमाडौं - बुधबार, असोज २८, २०७७
कोरोना संक्रमण मंसिरसम्म ५ लाख पुग्ने गोप्य प्रतिवेदन सरकारले ‘जनैको साँचो’ झैं लुकाएर राखेको थियो। आयोमेलले सुरुवाती पहिलो दिनकै विशेष समाचार प्याकेजमा त्यसलाई समेट्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु ट्वाँ परे। केहीले भने– ‘हामीलाई पनि दिनोस् न त्यो।’
विशेषज्ञहरूले गरेको ‘मोडलिङ’ लाई सरकारले आफ्नो तथाकथित इज्जतसँग जोडेर ‘बिरालोले के जाति लुकाए’ झैं गुपचुप राख्नुमा अर्थोक केही कारण थिएन। फगत, एउटै कारण– कमजोर अराजनीतिक मनोग्रन्थी, जसले शासकीय साहस दिँदैन। जसले जहाँ बुद्धि–शक्ति लगाउनुपर्ने हो, त्यहाँ ढाकछोप–जिद्धीमात्र उज्याउन लगाउँछ। जहाँ हच्कनु–शर्माउनुपर्ने हो, त्यहाँ उधुम–फुर्ति झिक्न सुर्‌याउँछ।
अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सल्लाहकारहरू पाँचै दिनमा ‘नेगेटिभ रिजल्ट’ आयो भनेर दसैं खसीको फलमासु खुब निस्केजसरी मख्खन–वक्तव्य दिँदैछन्। मन्त्रीहरू मास्क नलगाइ ‘रोलमोडल’ बन्न खोज्दैछन्। ‘स्टेरोयड’ ले थेगिएका प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनासँग कायम राखेको दुरी पक्कै ठूलै होला। आमजनता चाहिँ भगवान भरोसेमा भौँतारिइरहेका छन्। घरघरमा ज्वरो रन्कँदैछ। बुढाबुढीहरू खोकेरै अनिदो रात काट्दै छन्। अस्पतालका फोन उठ्दैनन्, डाक्टरहरू बिरामीको नजिक नपर्ने दिन झन्–झन् आउँदैछ। यतिबेला सरकारका ‘हटलाइन’ हरूले के काम गरिरहेका होलान्? लाइन चुँडिइसकेको होला।
ठिक यही मौकामा सरकारको उधुम-फूर्ति कम छैन। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना ‘भनाउँदा’ हरूलाई विशेष अनुकम्पा दिन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्। कम्युनिस्टहरूले आधुनिक पुँजीवादको जननी मुलुक भनेर दुत्कार्ने अमेरिकाको राजदूत पदलाई रोजा–खान्की कोसेली झैं युवराज खतिवडाको पोल्टामा हालिएको छ। खतिवडाजीको त्यो पजनी क्रममा अन्य भारदार प्रतिनिधि पनि लाभान्वित भए– लोकदर्शनले मुख्यसचिव छाडेर केन्सिङटन प्यालेस गार्डेनमा बसोबास पाउने भए, शंकर बैरागीको शक्ति उपासना पनि फलिभूत भयो। बैरागी ओलीका प्रसादले फलमस्तु हुँदा पासपोर्ट छपाइको ठेक्का कसले पाउँदैछ भन्ने विषय जागृत भएर आउला, केही दिन–सातामै।
डा. गोविन्द केसीको घाँडो धन्न छुट्यो। वास्तै नगर्ने भन्ने सरकार र सुन्नैपर्छ भन्ने डाक्टरका लागि सचिवस्तरको सहमतिले काम गरेकोमा खुसी हुनैपर्ने अवस्था थियो। डा. केसीको अनसनको मर्म र सरकारको नैतिक पतनको गहिराइ कहीँ कतै मेल खाने चिजै होइनन्। खासमा तिनीहरूबीच उत्पादनशील अन्तरविरोधको सम्भावना देख्नु नै दृष्टिदोष हो। यति कुरा पक्का छ, ओली सरकारलाई सुरुदेखि, गर्भैदेखि लागेको संक्रमण उपचार गर्न कुनै डाक्टरको चिकित्सकीय विद्या काममा आउने देखिँदैन।
ओली सरकारको यो संक्रमण के कस्तो हो त? यसबारे प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले विमर्श गरेको छ, सरोकारित छ त? शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस संक्रमित सरकारको खाजा खाएरै अर्को चुनावमा स्वतः बहुमत आउने सपनामा घुरिरहेको छ। ओली पनि देउवालाई रोजै खाजा ख्वाएर अर्को चोटि फेरि चक्मा दिने अघोर मुद्रामा छन्।
ओली सरकारको संक्रमणको जगमा एउटा जटिल कलन–विधि ‘एल्गोरिदम’ छ। त्यसका केही विशिष्ट लक्षण छन्– गरिब जनतालाई निरन्तर नारामा अल्झाउने, टाठाबाठालाई राज्य संयन्त्रका लाभहरूमा घुमाउने, ठेकेदारहरूलाई धन थुपार्ने व्यवस्था मिलाउने र नेताहरूलाई सबैमाथि रजाइँ गर्ने अवस्थामा पुर्‌याउने। अर्थात्, यो एउटा व्यापकरूपमा परिचालित संगठित धन्दा हो, जसमा पस्ने जो कोहीले रित्तो हात फर्कनुपर्दैन। र, यो धन्दा चलाउने मेसिनरी चाहिँ कहिल्यै पनि सुध्रन नचाहने, नदिइने कर्मचारीतन्त्र हो। जो तल्लो तहमा आन्दोलनको धम्की दिएर काम नगरी बस्छ, माथिल्लो तहमा चाहिँ नेताहरूलाई लोभमा लपेट्न अभ्यस्त छ।
यो सारा प्रपञ्चमा पारदर्शिता सबैभन्दा ठूलो बाधक हो, जवाफदेहिता सबैभन्दा खतरनाक सत्रु।
नभएदेखि, ५ लाख संक्रमित पुग्दैछन् भन्ने आँकडा पाँच महिनाअघि नै तेर्सिंदा तेर्सिंदै सरकार किन पुच्छरमा हात राखेर बस्यो? उसले यो अवधिमा लिएका मूल राष्ट्रिय निर्णयहरूलाई एक–एक गरेर कठोर कसीमा घोटेर हेर्ने कसले? कसलाई कसले जिम्मेवार बनाउने? सरकार त आफूलाई प्रश्न गर्ने शक्ति नै कसैमा देख्न सक्दैन। राज्य संयन्त्रभित्रकै दबाबले संयमित हुन्छ भनौं भने हविगत देखिएकै हो। उसले त सबैभन्दा पहिला शक्ति पृथकीकरणलाई नै कलुषित तुल्याइदिएको छ। बालुवाटारको चित्त रामशाहपथले बुझेजस्तो, टंगालले शिरोधार्य गरेजस्तो, सबैको लगुंरबुर्जा दाउलाई रत्नपार्कको खाले वा उच्चस्तरीय जुवाडेहरूले बुझ्ने भाषामा रुलेटको क्रुपियरले मिलाएजस्तो,कस्तो–कस्तो।
यस्तो लाग्दैछ– ओलीले अक्सिजन होइन, आगो लिन्छन्। कार्बनडाइअक्साइड होइन, आर्सेनिक पेन्टाफ्लोराइड फ्याँक्छन्। उनका निर्णयहरूमा चरम आग्रह झल्कन्छ, प्रतिक्रियाहरूमा अपरिमित क्षोभ। ५ लाखको आँकडा लुकाउँदा लुकाउँदै उनले बेसार पानीको प्रेस्क्रिप्सन फ्याँकेका थिए। तर, मानिसलाई सीमामै ‘होल्ड’ गरी परीक्षण गरेरमात्र भित्र छिराउने, जम्माजम्मी ठूला देशको एउटा सहरबराबरको जनसंख्यालाई सुरक्षित र स्वस्थ राख्ने काममा चाहिँ ध्यान दिएनन्। त्यसपछिका उनको समग्र सामथ्र्य आफ्नै दलभित्रको रँडाकोलाई थान्को लगाउनमा मात्र केन्द्रित छ। विद्यालयमा अनलाइन क्लास चलाउने विषयमा जस खान हतारिने उनी अहिले लाखौं जनता थलिइरहँदा भने मेख मारेर बसिरहेका छन्।
नेपाल कोरोना वैश्विक महामारीबाट प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो। परन्तु महामारीको मुहान चीन र महामारीकै सबैभन्दा मलिलो मैदान भारतको बीचमा रहेर पनि नेपालले आफूलाई एउटै उपायबाट मात्र जोगाउन सक्थ्यो– सुशासनका सामान्य मापदण्ड। सुशासन त्यहाँ हुन्नँ, जहाँ जनताले श्वास फेर्न नसकेर अक्सिजन नपाइरहँदा रेल्वे लिकको माटो ठेक्काका लागि ३२ अर्बको खेलो खेलिन्छ– एउटा जब्बर स्वाँठ कार्यकर्ताको योजनामा। त्यहाँ हुन्नँ, जहाँ एउटा नेतो विशेषको महत्वाकांक्षालाई सम्बोधन गर्र्न अपारको राजनीतिक तानाबाना हुन्छ, संवैधानिक मर्मको खिल्ली उडाइन्छ।
हो, नेपाल सुशासनको प्रतिरूप हुन्थ्यो, संसदबाट बेसारपानीको बखान गर्नुसट्टा सीमा सुरक्षामा जनस्वास्थ्य जोड्न सकेको भए, जनतालाई चेतनास्तरबाटै जगाउने व्यवहार–काम प्रकट गरेको भए। केही नतिजा आउँथ्यो, ईश्वर पोखरेल, भानुभक्त ढकालजस्ता ‘ढाक्रेबुद्धि’ का नेतालाई कोरोना नियन्त्रणको जिम्मेवारी नदिइएको भए। आफूमाथि प्रश्न गर्नेमाथि विष–वमन गर्ने ओली आफ्नै गुटमा कति गलित छन् भने एउटै उदाहरण ईश्वर पोखरेल हुन्। मनैदेखि पोखरेलप्रति विरक्त भए पनि पदबाट दायाँबायाँ गर्न सक्दैनन्। उनको समीकरण भत्कन्छ, गरेदेखि।
सरकारसँग अब के बाँकी छ? ओलीसँग अरू केही नभए पनि कुतर्कजन्य हँस्यौली गर्ने अथाह प्राकृतिक क्षमता छ। जनताले त्यसमा मजा मान्ने दिन कतिन्जेललाई हो, दैव जानुन्। शरीरमा सन्चो नहुँदा तपाईंसामु कोही आएर पँधेरे ठट्टा गरेको मन पर्छ कि पर्दैन? अहिले ओली बोले ठ्याक्कै त्यही हुने अवस्था छ। त्यही भएर बाठा ओली उति बोलेका छैनन्।
यति हुँदाहुँदै पनि एउटा चिज मान्नैपर्ने छ– सत्तारुढ आत्मविश्वास। यसलाई लोकलाजले छोएको छैन। माथिदेखि तलसम्म योजना बाँडफाँटको अपार परम्परा स्थापित भइरहेको छ। त्यसको सञ्चित लाभलाई अर्को चुनावमा खन्याउन सके फेरि जितिन्छ भन्ने बुझाइले त्यो आत्मविश्वासलाई मलजल गरेको हो। कोरोना महामारी, राज्यको उदासिनता र आर्थिक विशृङ्खलतामा जाकिएका जनताले यसलाई कसरी लिएका छन् भन्ने बुझ्न समय सिलसिलालाई कुर्नैपर्छ।
घरआँगनमा ठूला चाडपर्व आएका छन्। सडक र चियापसलमा छरपष्ट मानिसलाई न मोबाइलको रिङटोनले के भन्छ मतलब छ न अस्पतालमा बेड पाइदैन भन्ने हेक्का। महामारी जसरी पनि छिचोल्ने भन्ने यो अबोध जिद्धीमा प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटारबाट निस्पृह भएर साक्षी बसेका छन्।